Chelsea Oo Doonaysa In Ay PSG Kala Soo Wareegto Thiago Silva Si Ay Ugaga Baxdo Dhibta Difaaca Ka Haysata – STAR FM SOMALIA
nkasta oo ay wali ku jirto waqti kala guur ah, kooxda Chelsea ayaa doonaysa in difaaceeda dhexe ku soo xoojiso xidiga xulka qaranka Brazil iyo kooxda PSG ee Thiago Silva , waxaana sidan ku warantay jariirada Daily Star. Chelsea ayaa xili ciyaareedkan ku dhibtoonaysa horyaalka ay koobkiisa difaacanayso waxayna hadda isku diyaarinaysaa in ay dareenkeeda ku soo jeediso Silva.
31 jirkan ree Brazil ayaa oo arkaa mid ka mid ah difaaca dhexe ee aduunka ugu fiican inkasta oo ay hadda da’diisu wayn tahay. Blues ayaa doonaysa in ay Silva Stamfrod Bridge ku keento heshiis uu todobaadkii jeebka ku shuban doono 170 kun oo pound, waxayna Blues xidigan u aragtaa mid ay kaga bixi karto dhibaatada difaaca xili ciyaareedkan ka haysata.
Laakiin dalabka ay Chelsea ku doonayso Thiago Silva ayaan la ogayn in kooxda PSG ay aqbali karto halkaas oo uu ka yahay ciyaartoy muhiim ah.John Terry iyo Gary Cahil ayaa xili ciyaareedkan soo badhigay qaab ciyaareed aan qancin maamulka Blues halka da’yarka Zouma uu soo bandhigay qaab